Momba ny XINXIANG - Cangzhou Xinxiang International Trade Co., Ltd.
Cangzhou Xinxiang International Trade Co., Ltd.. manampahaizana manokana momba ny fanatanjahan-tena, dia orinasa mpamokatra izay mampitambatra ny R&D, famokarana sy varotra. Ny foiben-toeran'ny tanànan'ny Cangzhou, Provinsi Hebei, ny toerana stratejika ao amin'ny Circle Economic Economic izay misy tambajotram-pitaterana mandroso, mahomby, mety ary feno dia misy, ny orinasanay dia adiny roa fotsiny avy eo amin'ny seranan'i Tianjin Xingang, ny seranan-tsambo lehibe indrindra any avaratr'i Sina. .
Hatramin'ny niorenan'ny taona 1996 dia efa roapolo taona mahery ny fivoaran'ny orinasanay. Ny orinasantsika roa fanampiny, ieCangzhou Xinyu Sports Goods Co., Ltd. ary Cangzhou Shengyu Sports Goods Co., Ltd. mifantoka amin'ny R&D sy ny famokarana baolina vita amin'ny fingotra, PVC, PU ary fitaovana hafa, ao anatin'izany ny baolina kitra, basikety ary volley, sns. Izahay dia manana zavamaniry famokarana fananana efa-bola efatra miaraka am-pamoahana baolina 30000 kitapo isan'andro.
Manohana ny filozofia "fandidiana am-pitandremana sy serivisy marina", mifantoka amin'ny tsena sy mifantoka amin'ny mpanjifa ny orinasanay. Noho ny tontolonay ara-barotra tsara, ny kalitaon'ny vokatra miavaka sy ny fomba serivisy haingam-pandeha sy mahomby, dia nahazo laza tsara izahay.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny orinasa dia efa manitatra ny tsena any ivelany. Miaraka amin'ny vokatra rehetra azonay rehefa nandalo ny fanandramana EN 71 sy ny fanamarinana CE, dia nafarana tany amin'ny faritra tsena marobe toa an'i Eropa, Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Azia atsimo atsinanana, Afovoany Atsinanana, Afrika Andrefana, Afrika Atsimo ary Afrika Avaratra izy ireo. Isan-taona dia mihoatra ny 10 tapitrisa ny isan-karazan'ireo baolina naondrana, nahazo fankatoavana avy amin'ny mpanjifa iraisam-pirenena.
Mitondra ny fanahin'ny asa tanana asongadin'ny “fikatsahana ny fahombiazana sy ny fanaovana ny asan'ny mpisava lalana amin'ny sehatra”, Cangzhou Xinxiang International Trade Company Limited dia azo antoka fa hanome vokatra tsara sy serivisy tsara kalitao ho an'ireo mpanjifa sinoa sy vahiny ary koa hivoatra miaraka amin'izao tontolo izao.